KDE, Gnome, Xfce, LXDE uye maonero angu pamusoro pavo. | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux, Zvimwe
Desktops, sekugovera, inozadzisa chinangwa chavo zvinoenderana nezvatinoda zvekutanga uye mashandisiro atinopa kumakomputa, uye panguva ino, ndinotenda kuti zvese (Kana ruzhinji) isu tinoziva izvo mumwe nemumwe wavo anogona kupa.
Ndiri kutora mukana. Ini, mushandisi akaedza angangoita ese madhesiki anowanikwa mu GNU / Linux, Ndinofunga pane zvina zvakakosha kana zvakakosha pari zvino, uye ini ndaizotsanangudza imwe neimwe neiyi nzira:
1 KDE: Iyo yakazara kwazvo uye inogadzira GNU / Linux desktop.
2 Gnome: Mambo asina chigaro.
3 Xfce: Imwe nzira yeGnome 2
4 LXDE: Diki, inokurumidza asi isina simba mukirasi
KDE: Iyo yakazara kwazvo uye inogadzira GNU / Linux desktop.
Kutanga kubva padanho rekuti "rakanakisa" zvinoenderana nekuravira uye kudiwa kweumwe neumwe, hachisi chakavanzika kune chero munhu kuti neako kukwira nekudzika, KDE yagara yakabata nzvimbo ine rukudzo pakati pevashandisi ve GNU / Linux.
Nekuenda kwe KDE 4 zvinhu zvakashata, uye nekukurumidza kutsakatika kwe KDE 3.5, Ini, sevazhinji, ndakamhanya ndakananga Gnome. Uye ndinoreurura kuti ini nguva dzose ndainzwa kusava nebasa.
Izvo zvazvinoita KDE saka kukwana kunodarika izvo zvinoonekwa neziso rakashama. Semuenzaniso, chimwe chinhu chandagara ndichitsoropodza ihwo huwandu hwesarudzo irimo, zvese desktop nemashandisirwo ayo. Asi usanditeerere, izvi zviri kure nekuve zvakashata sezvo iri imwe yemapoinzi inotsigira dhesiki reGerman.
Dambudziko nderekuti kune vamwe, dzese idzi sarudzo hadzisi munzvimbo chaiyo uye izvi zvinoita kuti vashandisi vazhinji vanzwe kuremerwa nemikana yakawanda kudaro, iyo yandinodzokorora, inongounza zvakanakira.
Ne KDE iwe unonzwa kuti application yega yega ine izvo zvaunoda uye kunyangwe zvishoma. KDE yakavandudza zvakanyanya maererano nekuita uye kugona, uye isina kusiya zvirongwa zvatajaira, yakwanisa kuunza nzira nyowani dzekushandisa desktop. Muenzaniso weizvi ndeuyu Plasma and the Mabasa, zvishandiso zvinogona kuiswa mukushandisa kwakanakisa sezvazvingave zviri, uye izvo vazhinji vedu vachiri kusanzwisisa.
KDE idhesiki rakagadzirirwa vese avo vashandisi vanoda kuisa panjodzi pekushandisa zvishoma, asi ivo vanowana mukana wekuve vanobudirira uye vanobudirira mukuita kwavo kwezuva nezuva nekombuta. Kwandiri, iyo Desktop Nharaunda inoenda zvinopfuura kuve nepaneru (kana maviri), menyu, tray system ... nezvimwe. Iyo Desktop Nharaunda zvese zvishandiso uye zvinoshandiswa zvinotibvumidza kuti tishande zvakanaka nemafaira edu uye maforodha, uye mune izvi KDE inotora zvanza.
Chii chatinonyanya kushandisa patinoshanda nekombuta? Ini ndinofunga kuti 98% yevaverengi veiyi blog vanozobvumirana neni kuti ndiyo File uye Folder Manager. KDE Izvo zvine izvi zvekushandisa izvo zvisingade mharidzo uye hunhu hupi uye sarudzo dziripo: Dolphin. Kana iwe usingakwanise kuve unobudirira ne Dolphin, ipapo hazvizove nechero imwe File neFolder Manager, yakapusa.
Dolphin Iyo inopa ma tabo, akawedzera mapaneru, yakasanganiswa terminal, yekutsvaga injini, yekutsvaga yekusefa, uye zvimwe zvakanaka izvo zvinoita kuti iwe uve nekutonga kuzere pamusoro pemagwaro ako, mafaera kana maforodha.
Asi KDE zvinotoenderera mberi. KDE inotipa kusangana kwakazara uye kwakazara pakati pechimwe nechimwe chezvinhu zvacho. Kunyangwe ini ndisinganyanyo kuvashandisa, mubatanidzwa Akonadi / Nepomuk / Virtuoso vanokupa iwe simba risingaenzanisike kana rashandiswa mushe. Kana iwe uchida kuita chimwe chinhu, kashoma kuti iwe usingawane KDE iro rakakodzera basa racho.
Kurudziro yangu: KDE Izvo ndezvevashandisi avo vanoda kuve nezvose zviri padhuze, kuve vanoshanda, vanobudirira uye chengetedza yakawanda nguva sezvinobvira. Nharaunda yakanaka kune vashandisi vanobata huwandu hweruzivo, vagadziri, vagadziri kana avo vanongoda kuve nesarudzo yezvinhu zvese, uye kugadzirisa desktop yavo nenzira iri nyore inogoneka.
Gnome: Mambo asina chigaro.
Gnome Izvo zvaive pasina mubvunzo kwenguva yakareba mambo weDesktop Enzvimbo kubva pane yangu maonero. Nekuenda kwe KDE4, kusimuka kwe Ubuntu, uye zviri nyore izvo zvaigara zvichizviratidza, zvishoma nezvishoma zvakave zvinofarirwa nevashandisi vazhinji kupota nyika nekuburitswa kwe gnome2, uko zvese zvaive nyore, uye kuwana iwo maapplication pamwe neiyo Desktop sarudzo yakawanikwa nekukenya mashoma.
gnome2 iyo Desktop Nharaunda umo zvimwe zvakawanda zvaigona kuve zvakashanda uye kubva kwazviri purofiti iri nani ingadai yakaitwa. Nekudaro, ivo vanogadzira chirongwa vakapinda mukati gnome3, Desktop Nharaunda nemaraibhurari akavandudzwa, asi iyo yaimiririra shanduko kamwe kamwe (zvakatokura pane izvo zvakakonzerwa ne KDE4) yevashandisi ve gnome2, avo vakasiya kuraswa vachitsvaga dzimwe nzira dzakadai se Xfce, LXDE kana kuva wako KDE.
Haugone kutaura izvozvo Gnome pamwe chete naye Shell ive yakaipa application kure nazvo. gnome3 Ichine simba kwazvo uye ine maturusi akanaka kwazvo, kunyangwe vashandisi vazhinji vakasununguka nenhau, asi huzivi hwebasa hwakataridza tafura iyi hwakachinja zvakanyanya uye chitarisiko chayo, ndinotenda, hachina kutarisisa kune mushandisi wekupedzisira.
Chero zvingave zvinangwa zvevagadziri vayo, taona mune ino blog shanduko idzo desktop iyi yanga ichitora, izvo mumaonero angu, hadzina kumbobudirira. Gnome Iri kuyedza kupinda mumusika iyo isina ivhu, uye uko kune dzimwe nzira dzemberi dzakatovepo. Remangwana re Gnome iri mukati gnomeOS, chirongwa chandisingatombotauri nezvacho, nekuti zvishoma zvinozivikanwa nezvazvo.
Asi hazvisi zvese zvakaipa, sekutaura kwandaita, Gnome Iyo ine yakanaka kwazvo kunyorera, iri nyore kwazvo kugadzirisa, mune zvimwe zviitiko inoshaya nesarudzo ichienzaniswa neyainayo KDE, asi zvine simba uye zvinoshanda.
Gnome inoshandawo sehwaro hweimwe Shells inonakidza kwazvo sezvavari kubatana y Cinnamon. Yako File neFolder Manager (Nautilus), kunyangwe isina hunhu hwese hwe DolphinIzvo zvakare zvine zvibereko uye zvakapusa chaizvo zvichienzaniswa neyakare yakataurwa. Kuvandudzwa pa gtk, Iine akawanda uye echitatu-bato mapakeji, asi zvinosuwisa kuti Mambo anga achirasa mukurumbira.
Kurudziro yangu: Gnome Izvo ndezvevashandisi avo vanokwezva nematambudziko matsva uye hunyanzvi hwekupindirana hwakanangidzirwa kunyanya pakubata tekinoroji, vasina hanya nekushandisa keyboard uye kutambisa zvishoma zviwanikwa. Yakanaka kana iwe ukashandisa mamwe makomba se Cinnamon o kubatana.
Xfce: Imwe nzira yeGnome 2
Xfce auya kuzadza nzvimbo yakasiiwa muvakawanda gnome2. Iyo desktop iyo yatove nemakore mashoma ekukura uye yanga ichichinja zvishoma nezvishoma, iyo inononoka kusimudzira iri nekuda kweavo vashoma mapurogiramu yainayo. Chimwe chinhu chinenge chinopokana kana tikafunga izvo Xfce yakave yakakurumbira mumakore apfuura.
Xfce anga ari a Gnome iine mashoma mashandiro. Chitarisiko chakangofanana uye chinosangana nezvinodiwa kuti zvive zvakapusa, zvinokurumidza, zviri nyore kumisikidza uye zvakambosarudzika, zvakanakisa. Asi sezvo zvese zvaisagona kuve zvakanaka, inoshaya zvinhu zvakawanda, mashandisiro ayo ari nyore kwazvo uye haina maturusi akanaka ekugadzirisa iyo system.
Ehezve, kuvakwa pamusoro gtk, unogona kushandisa zvakakwana mashandisirwo e Gnome, asi zvirinani ndinoda kuti riwane mamwe maturusi ayo.
Imwe yeapo asina kusimba mapoinzi e Xfce iri chaizvo rairi File uye Folder Manager: thunar. Pasi pechikonzero chekuti iri kuzorasa kureruka, vanogadzira vanozeza kuwedzera mamwe ma tabo kana mapaneru, saka kushanda nechishandiso ichi kunoderedza yakawanda yekugadzira.
Kune zvimwe zvese, zvese zviri nyore kwazvo uye zvinogona kugadziridzwa Xfce chose (kana chikamu chikuru) kubva kune yako Configuration Center. Shanduro 4.10 yakawedzera yakawanda yekuvandudza kwevashandisi uye zvingave zvinonakidza kuona ramangwana reiyi Desktop Nharaunda izvozvi Debian yakazvigamuchira seyakagadzika desktop.
Kurudziro yangu: Xfce Izvo ndezvevashandisi avo vasingade kuita epamberi mabasa nehurongwa, vanofarira yakapusa Desktop, uye vanoda kuve nekwaniso kune ese maapplication avo nekungobaya mashoma. Inogona kuve yakanaka kune Vanyori, Vanyori venhau uye vanhu vanoshandisa komputa pazvinhu zvakakosha, zvichipa muyero pakati pesimba nekumhanyisa.
LXDE: Diki, inokurumidza asi isina simba mukirasi
LXDE idiki pane eDesktop Mamiriro akagadziridzwa pa gtk, ndiyo inokurumidza uye nekudaro, iyo inonyanya kushomeka kwayo maitiro, saka senge Xfce, unofanirwa kushandisa maturusi mazhinji kubva Gnome kupedzisa huwandu hwayo hwezviitiko.
Kuonekwa kwaro nekumisikidza kunotiyeuchidza nezveWindows XP uye nebasa diki iwe unogona kuwana zvakagadzirwa zvakanaka, zvisinei, poindi inotsigira iyi Desktop Nharaunda ndiyo yayo File uye Folder Manager: PCManFM.
PCManFM Iyo ine humwe hunhu hwehama dzayo dzakura senge eyelashes, iyo inosanganiswa nekumhanya kwayo uye runako, inoita kuti ive yakanakisa imwe thunar, iyo inopfuura nekurehwa nezve kugadzirwa, kugadzirisa uye kugadzirisa.
Kurudziro yangu: LXDE Iyo yakanakira yakaderera-kuita zvikwata nekuda kweiyo bhalanzi iyo inotipa isu pakati pekumhanya uye nyore. Yakakurudzirwa kune vashandisi vane zvishoma ruzivo, nekuti zvese hazvisi padyo padyo.
Ndakazvitaura pakutanga uye ndinozvidzokorora zvakare: Imwe neimwe tafura yakakwana kana kwete zvinoenderana nezvinodiwa neimwe yega. Chero ipi yeiyi matatu akasiyana (kubvisa Gnome goko)Vakagadzirira uye vakagadzirira kuenda, vanogona kuve nyore kushandisa kune vashandisi vatsva.
Iyi posvo hapana chimwe kunze kwekungofungidzira uye kusasarura kweimwe yeaya maDesktop Enharaunda. Mushandisi wega wega anoziva kusvika pamwero wavanogona kugadzirisa, kumisikidza uye kushandisa zvisarudzo zveumwe neumwe wavo, izvo, zvechokwadi, zvandisingakwanise kutaura pano.
Ivo vese vakanaka pane izvo zvavanoita, uye yega yega inopindura kune izvo zvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzevashandisi. Ukandibvunza, ndichagara KDE y Xfce, zvinoenderana nezvaunoda kuita. Ndeupi waunoda?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » KDE, Gnome, Xfce, LXDE uye maonero angu pamusoro pavo.
Chokwadi ndechekuti ndinoda Xfce, LXDE uye KDE, ivo vakanaka kana imwe kana imwe ichitsamira pane Hardware nekuti mune ese matatu ini ndinogona kuita zvakafanana zvinhu asi kwete nenzira imwecheteyo. Xp
Makubex Uchiha (azavenom) akadaro
iyo yakanaka info shamwari xD kwandiri ini ndinoda kde kunyangwe iyo pachayo iri inorema asi ini handina basa nayo: 3 runako kana iwe uchikwanisa kuzvigadzirisa sezvaunoda xD pano ini ndinokusiya ini sekusiya kwandakaita kde yangu yakakosha:
uye yapa 😛 ini ndinosiya iyi dzidziso yandakaita pane yangu blog kuigadzirisa uye ndisiye gumi 😛
Pindura Makubex Uchiha (azavenom)
Zvinondipa kukanganisa uku:
Ini ndatoziva nezuro zvisirizvo mushe akamitisa blog rangu nekuda kweiyo yakapusa yekushanya ingangoita 3000 kushanya mumwedzi ingangosvika mina yandaive nayo, uye ndinoti dzinenge 4 nekuti ndakange ndasara zvishoma kuti ndisvike uye izvo zvinoitika kwandiri senge kuti hapana pasina kundinyevera kare ndosaka ndakarasa zvese zvakandibhadharisa kuti ndiite 🙁
Ndakaziva kuti mangoti @elav paakaedza KDE aizogara nehahaha. KDE yakavandudza zvakanyanya mushanduro dzekupedzisira uye mune iyi vhezheni vachatarisa pakugadzirisa mabugs uye kudzoka, sarudzo yakanaka kwazvo yevanogadzira kuti "vatore chinja "
GNOME2 yanga iri yangu yakasununguka kwazvo, inogadziriswa, uye inokurumidza pamatafura akaomesesa. Zvinosuruvarisa kuti huzivi hwake hwachinja. Ndosaka ndiri kunamatira naDebian Squeeze kusvikira rutsigiro rwayo rwapera, ndobva ndafunga zvekuenda ku openbox, ndiani anoziva xfce.
Pindura kuna 103
Ini parizvino ndine KDE uye Xfce pane netbook rebasa. Ndinofanira kureurura kuti nguva pfupi yadarika ndakashandisa yakawanda KDE…
KDE chimwe chinhu. Ini zvakare ndinoshandisa KDE uye Xfce asi ndinofanira kureurura kuti ne KDE ndeyekusvika nekushandisa, zvese zvakagadzirira kuitira kuti mushandisi asadi kuita kana kuziva chero chinhu, chakanakira kushanda uye kwete kutambisa nguva kugadzirisa zvinhu.
Parizvino ndiri kukunyorera iwe kubva kuXfce uye chokwadi ndechekuti iwe unofanirwa kuisa nguva yakanaka kuti uwane "kugadzirira" nekuti nekutadza zvinotyisa, kutaura zvazviri ndinopedza nguva yakawanda ndichigadzirisa nekugadzirisa pane kushanda xDD
Hongu, hongu, asi kungoona iwe, Tuning Xfce kwandiri zviri nyore kupfuura ne KDE. Uye zvakare, Gtk ine mamwe akawanda madingindira uye sarudzo, iwe unofanirwa kuenzanisa gnome-tarisa ne kde-tarisa ..
> mimwe misoro yakawanda
Ndiwo iwo musoro unouya ne KDE (uye Obsidian) wakanaka kwazvo 🙂
Pindura kuna Sys
Mhoro mumwe mubvunzo. Ngatikanganwe nezvekugadzirisa, usatya chinhu, mavara, zvishongo, nezvimwe. Tichazotarisa pane chete sisitimu uye maapplication ekushanda sezvazvinouya, pasina "kurara" nekuti semuenzaniso, iyo vara kana hwindo mhedzisiro haisi kuzoita chirongwa chandiri kugadzira kana chimwe chinhu chandinotsvaga pahuwandu radiation mumhepo inozvigadzirisira ini (ndosaka ndichiti "pijadas" isina kukosha). Wanga uchishandisa linux kwemakore mashoma (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Scientific Linux paGnome, KDE uye Xfce) uye uchichinja kugovera kwezvinhu zvehardware uye munguva pfupi yapfuura nekuti ini handigone kuisa mwedzi mishoma, ini ndinoda makore nekuti izvo zviedzo ndizvo zvinondipedza , uye ibasa, tsvagiridzo. Hapana mitambo yemarcinanito, hapana zvinhu zvisinganzwisisike, pamwe vhidhiyo nemimwe mimhanzi mp3 uye chete pakombuta yangu yega. Asi pachokwadi, ini handifarire kuve nekusiyaniswa kwakasiyana uye nharaunda pakombuta imwe neimwe, kana paine makomputa mashanu akafanana akaisirwa zvinhu zvangu. Nguva yakakosha uye handigone kuve netsika dzakasiyana kana maitiro kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe, nekushandisa chirongwa mune imwe nharaunda uyezve imwe kune imwe nharaunda ine dzakasiyana sarudzo, tabo, nezvimwe. Iwe unonzwisisa zvandiri kureva, kunyange hazvo mumwe munhu achati izvo zvakafanana zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa pamatafura akasiyana. Asi handizvo.
Saka ndakasarudza Scientific asi iyo KDE yainotakura ndeyechinyakare, kunyangwe iri diki, inoshanda uye ndizvo zvandinotarisira, asi nharaunda iyi iri yechipiri uye havapi kukosha kwakakosha kuti ive yakaiswa zvakanaka uye izadziswe. Zvirinani kuti handina kukwanisa kuve nazvo senge muFedora KDE kubvira payakatenderera. MuSainzi, sekuCentos ini ndinofunga, iwe unofanirwa kudzora manyorerwo akawanda ekushandisa, kana iwe uchiziva kuti uvaone iri imwe, kusiya KDE yakachena. Asi zvandinotaura, handina kuzviwana uye handizive kuti imhosva yangu here kana kuti kugoverwa hakupi zvimwe.
Saka nhasi Slackware ine Kde uye Xfce iri mundangariro dzangu. Ndeupi waungasarudza? Ndiri kufunga kuti ndine muchina wekare uchaita zvakanaka Kde, kunyangwe neSL yakafamba zvakanaka uye neazvino Xubuntu zvirinani. Xubuntu haasi kuenda kwandiri, hapana Ubuntu, ndosaka ndisiri kunyepa. Saka imwe sarudzo ingave Kde mune zvese kunze kweiyo yekare neXFCE, asi… .. Nezve tambo yekurudziro yako yeKDE yenzvimbo dzinobudirira, ungazvikurudzirawo kwandiri here sezvo ini ndichingozvipira kutsvagisa kuyunivhesiti?
Ini ndinofanira kutaura kuti SL neGnome ndiyo yakanakisa, ndinoshuva kuti dai yakashanda nemazvo ne KDE, asi ini ndototaura kuti handina kubudirira. Kana paine chero munhu ane kurudziro yekuisa KDE paSL kana Centos nehumwe hutsanana senge neiyo Fedora KDE spin ini ndinogona kuhukoshesa. Iyo nyaya yemultimedia codecs uye zvinhu muSL KDE ine zvishoma zvinouraya.
Chimwe chinhu nezve KDE uye kurudziro yako. Ini ndinoshandisa madhiraivha eUSB zvakanyanya uye iwo akakosha. Uye muGnome vanobviswa zvakachena, asi kwete mu KDE ne dolphin, unogona kuvasunungura, hongu, asi vanogara vachidyiswa uye pakupedzisira iwe unofanira kuvadhonza kuburikidza nekugeda mazino ako ... rimwe zuva dhisiki richapwanya, zvechokwadi! Iwe une mhinduro mu KDE? Izvi zvakakosha nekuti ndanga ndichishandisa SL Gnome nekuda kweizvi.
Ndinoona kuti pakupedzisira wanga usiri mubvunzo. Chekupedzisira, uchifunga nezvebasa rangu, unokurudzira SL kana Slackware?
Kwazisai, uye kuti iwe unoziva kuti nekuda kwevanhu vakaita semi, vazhinji vedu takasiya Windows.
Pindura kuna Changamire
Zviripachena zvaive zvehunyanzvi uye kune vashoma mainjiniya kana masayendisiti ari pano. Ndatenda zvakadaro nekuti zvimwe zvinhu zvaunonyora zvinobatsira zvakanyanya. Ndakaiverenga rinenge zuva nezuva.
Yup, ndiri kutanga kutenda kuti hongu hahaha
Ehe !!! \_ (ツ) / asi munhu wese pamwechete ari kuita zvakanaka kwazvo.
Ini ndinoda LXDE uye iyo "isina simba shoma" iri munzira yakati mburei kune nharaunda ine yangu maonero ane mwero mumwe weakareruka mafaera vanobata andakaona, akadai sePCManFM, asi hei. Pakutanga ini ndanga ndichishandisa Gnome uye ini ndaishandisa iyo paakakwira kuGnome 2 asi ini ndaive mumwe wekutanga kurovera muGnome 3 uye chaiye Shell yavo kana chero Gnome 3 yakandiudza kuti yakange yave nguva yekutsvaga kutsva kutsva kudzamara ndasvika kuLXde uye ndinofara kuona kuti mune zvimwe zvinhu zvaitokurumidza kupfuura XFCE asi ini ndinoziva kuti XFCE inoirova muRobustness nekuti kunyangwe iine vashoma vanogadzira (Ndine chokwadi kuti nharaunda yeXFCE yakakura kudarika LXDE) asi hei… kupenga kwese nedingindira rake.
Zvinotaridza kunge zvisina kusimba kwandiri, nekuti nazvo unogona kuita zvimwechetezvo sekune dzimwe nharaunda, uye nekushandisa kwakaderera, semuenzaniso ndosaka ndichida Lubuntu, ine yakanaka kwazvo yekuona theme uye inoshandisa zvishoma zvishoma.
Chero zvazvingaitika, ndingati haina hunyanzvi kune vashandisi venguva yekutanga kupfuura mamwe maratidziro, kunyanya pachinhu chekumisikidza LXDE, ndipo painokamhina zvishoma ...
Hongu, hongu unogona kuita zvinhu zvakajairika nedzimwe nharaunda, asi zviri nyore uye zvakakosha mabasa.
Ngatione, ndichaita kuti zvive nyore kwauri. Kana ndichitaura kune vane simba, ndinozviita zvichibva pane zvigadzirwa zvekushandisa izvo chishandiso chaunopa kwauri semuenzaniso, pindura mibvunzo iri nyore:
- PCManFM ine zvemukati firita bhaa?
- PCManFM ine yakavakirwa-mukati yekutsvaga injini?
- PCManFM ine yakavakirwa-mukati terminal?
- PCManFM ine mapaneru here?
- PCManFM ine sarudzo yekuratidza mapoka emafaira?
- PCManFM ine sarudzo here yekuenzanisa mafaira?
Haufanire kundipindura nekuti mhinduro ndinoiziva. Ini pachangu ndinofanira kubvuma kuti kunyangwe ndadii Xfce, haizombove nehafu yesarudzo iyo KDE inayo, iyo nematurusi ayo inoita kuti ive inobereka kwazvo uye ine simba Desktop iripo.
Kune savvy, ingoenzanisa krunner neGnome "mhanya". 😀
Asi icho ndechekuti kugadzirwa zvinoenderana nepfungwa yako yekugadzira, izvo hazvireve kuti iwe wakanganisa, asi kwandiri chimwe chinhu chinogadzira chikumbiro chinondibvumidza kuti ndiite chimwe chiitiko nekukurumidza uye nyore, kwauri icho PCManFM ine firita bar zvemukati kana kutsvaga kana chinongedzo mabasa, kwandiri iwo akawedzera, mabasa anoitwa nemamwe mapurogiramu akanyatsogadzirirwa ivo, senge terminal, kana bhokisi rekutsvaga (chiri chokwadi kuti chimwe chinhu icho LXDE nekushomeka chinoshaikwa nguva) kana kusefa, wakaparadzanisa, zvinhu zvaunogona kuwedzera nemabhatani maviri, kana izvo sezvandambotaura, zvimwe zvirongwa zvakagadzirirwa izvozvo zvinogona kuzviita.
Semuenzaniso, nei uchienda kugadzirisa foto kubva kuIzwi, uchikwanisa kuigadzirisa kubva kuFotohop, iyo yakagadzirirwa iyo?
Kunze kwezvo, LXDE yakasikwa ichitsvaga yakajeka uye yakapusa desktop, inoenzana nemashoma mabasa kana mashoma akazara kana epfupi mabasa, saka kana mumwe munhu achida kuve nekubudirira, ivo havasarudze LXDE nekuti haina kuitirwa izvo.
Kunze kwezvo, kana iwe uchida kuve unobudirira mune rimwe basa mukambani, iwe ungangodaro uchafanirwa kushandisa Windows nemahofisi ayo zvirongwa uye masuti, pamwe nezvimwe zvirongwa zvakagadzirirwa ichi kana icho chiitiko kana basa, kunze kwekunge iwe uchifanira kushandisa Windows kubasa. GNU / Linux.
LXDE haina simba shoma, iri, pakanyanya, isingabudirire pane mamwe mamiriro edesktop, asi ini ndinofunga kuti simba haringobatanidzwe nezinga rezvigadzirwa, asi nezvimwe zvinhu, sekushandisika, kuwanikwa, chinoonekwa ...
Asi icho ndechekuti kugadzirwa zvinoenderana nepfungwa yako yekugadzira, izvo hazvireve kuti iwe wakanganisa, asi kwandiri chimwe chinhu chinogadzira chikumbiro chinondibvumidza kuti ndiite chimwe chiitiko nekukurumidza uye nyore, kwauri icho PCManFM ine firita bar zvemukati kana kutsvaga kana chinongedzo mabasa
Chaizvoizvo, mabasa anoita kuti kushanda nemafaira, zvinyorwa, maforodha zvive nyore. Ngatiti iwe unovhura PCManFM, unoenda kune dhairekitori ine chiuru mapepa ePDF, iwe unotanga kutaipa zita rayo uye izvo zvaunonyora zvinofanirwa kufanana nezita rekutanga. Neye Dolphin firita, sezvaunonyora, mamwe magwaro anonyangarika, achisiya chete zviitiko ... Chii chaunofunga kuti chinokurumidza uye chinobudirira?
Ini handibvumirane newe zvachose nezveWindows = Kugadzira.Kutanga, Windows Explorer inonyangadza, nyonganiso, zvese zvinhu zvinoratidzwa nenzira inokanganisa, haina kujeka, haina mamwe matabhu kana mapaneru. Zviri nyore kwazvo kushandisa PCManFM kana Thunar pane Windows Explorer, kukupa muenzaniso.
Ngatione, kana iwe ukatora chete icho chikamu chendima, chingave chisina njere, kana chinowirirana nezvaunofunga, asi chimwe chikamu ndicho chikuru chekupokana kwangu, iwo mabasa, ehe, asi mamwe mabasa, hachisi chinhu kuti ini ndinofanirwa Kuva nePCManFM inofanirwa kuve hongu kana hongu, kana iwo mabasa aunoti achikubatsira iwe kuti uve unobudirira, zvakanaka kwazvo, asi kana zvichizivikanwa kuti zvinokanganisa mashandiro, uye LXDE inofanira kuve yakajeka uye yakapusa, isingabudirire , kana kwete Sezvimwewo dzimwe nharaunda, kazhinji pane mapurogiramu akareruka, akareruka uye anobudirira uye dzimwe nguva dziripo, nekuti zvinonetsa kuwana chiyero chakakwana pakati pechinhu chakareruka (icho chinowanzo kuve nemabasa mashoma, sarudzo kana maficha) uye chimwe chinhu chinobereka.
Kana ini handina kuti Windows yakafanana kana kuti yakanyanya kunaka mukugadzirwa, asi kuti ndiyo inowanzo shandiswa mumakambani kushanda, izvo hazvireve kuti kunyanyo shandiswa, ndiko kunogadzira zvakanyanya.Kana uri mugwara, Windows Ongororo Inosveta, asi ndiyo yakanyanya kushandiswa, izvo hazvireve kuti ndiyo inogadzira kwazvo.
Zvakanaka, ini ndinoshandisa LXDE uye semaneja wefaira ini ndinoshandisa Nautilus saka chinhu chePCmanFm chapera, uye pachangu ndinosarudza GNOME, uye kuti haisi yemushandisi wekupedzisira, inhema yeavo, ndiyo nharaunda yemushandisi iyeye. haudi kuenda pimp zvimwe zvese, zvakakwana kune mutsva muLinux
Ini ndaifarira chinyorwa ichi, uye ndichitarisa kuwebhusaiti yako kana ndikaona bhagi, unoona zvishoma kuti munyori ndiani, kureva kuti, iro diki diki bhokisi mukupedzisira iwe unofanirwa kurichengeta, asi isa kumwe kumwe kwakanyora, Ini semuenzaniso ndaizoisawo padyo nekara yekuverenga.
Nezvechinyorwa pachacho, KDE ikozvino ndiyo yakanakisa uye yakakwana sarudzo, kunyangwe ini ndaizoda kuti ivandudze zvimwe zvekushandisa zveKDE, ini handidi chero chinhu, semuenzaniso, iyo Dragon Player, kana VLC, uye chokwadi chiri, Ini ndinowana dzimwe nzira shoma dzakanaka sevatambi vevhidhiyo muQt, Bangarang haikwezvi kutarisisa kwandiri kana .. dai uchiziva vamwe, ndingafarire.
Kutenda nezano. Muchokwadi, isu takanga tatofunga nezvekuisa munyori kumusoro .. 😀
About KDE, ini ndinoda VLC yangu sezvazviri, uye ini ndangoona Bangarang uye ndinoida 😀
Ngatione, hazvisi zvekuti handivade, ndezvekuti havazi ivo vhidhiyo yeGNU / Linux vandinoda zvakanyanya, ndinofunga ndakakuudza, muGnome, ndinoda Totem, ndizvo zvinoita mutambi kwandiri, iyo chaiyo uye inodikanwa sarudzo, iri nyore interface ... Ndiri kutsvaga chimwe chinhu chakafanana muKDE, ese ari maviri akawandisa zvakanyanya, uye ini handidi Dhiragoni Player.
Bangarang haisi yakaipa vhidhiyo inoridza, asi mutambi anotyisa uye anoronga emaraibhurari emimhanzi, ndosaka ndisingadi, ndinopasa zvirongwa zvakapetwa, kana Amarok yatove kuita basa rekuridza mimhanzi chaizvo, nei ndichifanira ndine mumwe mutambi Chii chinondizarirawo kwandiri, asi chii chinondirongera zvisiri izvo?
Amarok kana Clementine wemimhanzi, uye nepo VLC yevhidhiyo, apo ini ndichienderera mberi nekutsvaga kwangu kwakanaka uye akapusa vhidhiyo vatambi ve KDE.
Edza SMPlayer ndakaifarira zvakanyanya uye ndakashandisa VLC hupenyu hwangu hwese.
Kutenda zvakare kune avo vakaisa, kunyangwe yangu smplayer yandisingade zvakanyanya kune iyo interface, yakafanana neVLC, yakaipa uye yakati kuremerwa nesarudzo.
Edza SMPlayer 😉
Zvakanaka, zvakanaka ndinozviedzawo 🙂
Unogona kuyedza kaffeine, umplayer, kmplayer, playbak, bakaar, loopy, ese ari nyore akapusa kde vhidhiyo vatambi.
Ndatenda nerondedzero, ini ndinovimbisa kuramba ndichivatarisa 🙂
Miguel Angel Martinez akadaro
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti sezvo ini pandakawana SMPlayer ini handidi kudzokera kuVLC.
Ini ndaizoratidzira kubatanidzwa kwayo kwese ne KDE, manejimendi wayo wemusoro wenyaya (Inotomboaodhaunirodha) uye zvakare kuti kuburitswa kwevhidhiyo kunoenderera kwandakarega
Pindura Miguel Ángel Martínez
Ini ndinoda anenge munhu wese kusara lxde.
Ndakaedza sinamoni, ndinoshandisa kubatana, ndinoshandisa gnome shell, ndinoifarira asi handizive kuigadzira kuti iwedzere kunaka.
Kune rimwe divi, KDE ndeimwe yeayo andinoona uye ini ndinorangarira windows uye izvo zvinondipa zvishoma kurambwa, asi handirambe kuti akawanda kde desktops andaona akanaka, asi handizive kuti vakazvifambisa sei, asi nyaya ndeyekuti inouya sei nekusarudzika (chakra, uye imwe livecd distros ine kde) Ini ndaisazvida zvachose 🙁
Ichokwadi. Izvi zvinoudzwa iwe nemumwe munhu asingade kutaridzika uye kunzwa kweKDE nekukasira, asi seXfce, KDE inogona kugadziridzwa kune yaunofarira uye kunyange kuipa iyo kutaridzika kweimwe chero desktop desktop.
KDE uye Xfce ndiyo inonyanya kugadziriswa ..
Uye LXDE futi. Iyo haina akawanda graphical maturusi ekuzviita, asi inogona kuve yakagadzirirwa, inogona, uye yakawanda.
Asi iwe unoshandisa rimwe basa shoma, ndinofunga .. Pane zvinhu zvaunofanirwa kuisa neruoko mu .gtkrc-2.0 kana gtkrc.mine mafaera, semuenzaniso.
Ehe, ichokwadi kuti kumisikidza mameseji mafaira kunotora nguva yakawanda kupfuura kana kuchiitwa nemifananidzo yekushandisa. Zvino, sezvo ini ndisiri mumwe wevaya vanofarira kuve nedesktop rakasiyana vhiki rega rega, ini ndinoita maitiro ekugadzirisa zvinongoita kamwe chete, panguva yekumisikidza. Zvino, kana zviri zvandinofarira, ndinokanganwa kugadzirisa desktop yangu (kazhinji shanduko ye Wallpaper).
Pamusoro pezvo, pandinoona kumhanya kunoita LXDE inoshanda kana ichienzaniswa nedzimwe nharaunda, handina hurombo kuti ndipfuure neimwe nzira yakaoma, nekuti kugona kwenzvimbo kunopa kune chero zvipingamupinyi zvayingave ... kwandiri, Ehe saizvozvo.
mu taringa mune posvo yekuchera kde zvakanaka kwazvo.
Uye chinongedzo chiri? Thanks 😀
Ichokwadi kuti KDE yakanyanya kukwana asi sezvo iri yakazara zvakakwana zvakare zvakareremerwa zvakanyanya kunyangwe ivo vakakwanisa kuipa kureruka kubvira vhezheni 4.0. Ndinovimba kuti ikozvino nekutengwa kweDigia kubva kuQt iyo KDE nzira ichachengetwa munzira kwayo nekuti zviri kubiridzira kuti ikozvino mushure mekufamba kwakawanda vanofanirwa kutanga kubva pakutanga kuitira kuti varidzi vatore nzira yakaipa. dai ndaifanirwa kusarudza imwe nharaunda kunze kweLXDe ndaizogara muXFCE asi sekutaura kwandaita… ndiwo mafungiro angu.
Dai iwe waiziva. Izvozvi ndiri kushandisa KDE pabhuku rangu rebhuku.uye unoziva chii? KDE inondipedza zvakada kufanana (dzimwe nguva zvishoma, dzimwe nguva zvakanyanya) kupfuura Xfce, uye zvakanyanya, zvakati wandei pane Gnome ... Iwe unofungei?
Shamwari, tinoremekedza maonero ako, hongu tinoita nekuti zvekuravira: Mavara 😀
Ini ndinoshandisa KDE neXFCE, dambudziko rangu neKDE nderekuti yangu CPU yekushandisa inobhururuka uye chifananidzo changu chasununguka, maererano nekushandisa ndangariro ini handina matambudziko.Une ruzivo here kuti chikonzero chekushandisa kwakakwira kweCPU chingave chii?
Edza kushandisa system yekutarisa uye kuronga kubva kumusoro kusvika pasi mu cpu kuti uone chinonyanya kushandisa, iwe unogona zvakare kuyedza kuremadza nepomuk kana akonadi. Kuti utore shoma cpu iwe unogona kuenda kune kutaridzika kwemaapplication, maitiro, gadziriso yakanaka uye nemifananidzo yakajeka sarudza diki cpu. Dzimwe nguva inotonhora kubva mukushandiswa kweimwe yechitatu bato tmb plasmoid.
Nekutadza maitiro acho akarairwa neCPU kushandiswa.
Izvo zvandinofungidzira zvinoenderana zvakanyanya neiyo Hardware yaunoshandisa.
Ndine AMD Athlon 64 × 2 Dual core 3800+ 2Ghz processor ine 4Gb ye RAM.
😮 zvakanyanyisa?, Ndeipi netbook yaunotora uye / kana kutaurwa ?? uye chii distro tb ???
kuona kana ichishanda pane yangu: p
Iri ndiro bhuku rake remambure: https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
Uye inoshandisa Debian Kuedzwa (ikozvino Wheezy).
HP Mini 110 ine 1Gb ye RAM .. 😀
Ini ndinonyatsoda LXDE, zvishoma zviwanikwa zvayinoshandisa zvinoshamisa uye kwandiri zvine zvivakwa zvakati wandei, F4 yekuwana iyo terminal kubva kune chero dura, mabhukumaki, nekunyora chete ndinogona kutsvaga iyo faira mukati mefaira ini ndiri, nezvimwe.
Ndichiri kuziva kuti haisi yemushandisi wevanoziva uye kuti havazi vese vangade kureruka kweLXDE.
Kune avo vanofarira madhizaini madiki, ini ndinokuratidza iyo skrini yeKDE yangu kubva mageia 1 pandakanga ndiinayo pc yangu:
Ipapo usataure kuti haugone kuve neNice KDE.
Ndichitora mukana wekutaura kwakapfuura, mazano angu ekuzvininipisa kune dhizaini yewebhu, iyo yandinoda:
- kupfupisa maurls kana uchitsikisa, izvo hazviitike sezvandakaita mumashoko angu apfuura anosiya muviri
- munyori weposvo haaratidzike zvakanaka, zvirinani pamusoro kana kuzvisimudzira zvakanyanya
Makorokoto angu pamusoro peiyo nyowani dhizaini, hapana zvakawanda zvekuvandudza, inenge yakwana.
Kupfupisa ma URL kwakanaka kwazvo, unofanirwa kuona kana alaintm (ndiani anoronga dingindira) ane nguva ikozvino yekuzviita, nekuti uku ndiko kuita kwanga kusiri muzvirongwa uye ane zvimwe zvinhu zvekuita hahahaha.
Ini ndinoshandisa KDE paMageia 2, ndinofara kwazvo nazvo, kunyangwe chiri chokwadi kuti dzimwe nguva dzakawanda uye dzimwe nzira dzakapararira dzinoisanganisa, asi ndinonamira nazvo nekuda kwesarudzo dzayo dzekumisikidza.
Ndinodawo kuverenga nezve dzimwe sarudzo, izvozvi ndiri kufunga kuisa Chiedza, icho kunyange hazvo neimwe nzira chisina kumbobvira chave mberi, munguva pfupi yapfuura vari kushanda nesimba, zvakare zvinogoneka (kunze kwemenu). Uye kuti iwe unoratidzira dzimwe nharaunda, ini ndanzwa nezve Openbox uye zvigadzirwa, asi pane izvi ini handina kuona zvinhu zvakawanda mavari.
ndatenda neruzivo rwanhasi
Ini ndoda kutotenda Ubuntu nekuisa Kubatana uye kundiita kuti nditsvage imwe distro, nekuti kubvira pandakaisa Xubuntu ndakafadzwa, yangu laptop inotaridzika seimwe, inodhura. Iyo chete yekudzora kwekuravira kwangu ndeyekuti kuoneka kwepaneru hukuru ini ndaifarira iyo Gnome Classic zvakanyanya muUbuntu. Kune vamwe vese, hongu, Thunar inogona kushomeka zvishoma asi kwandiri ndine yakawanda.
Ini ndinotenda kuti hapana ane simba kupfuura rimwe, sekuratidzira kwakaita munyori, inyaya yekuravira uye zvinangwa, zvinangwa. Pachagara paine mhando idzi dzemakakatanwa, kwete nemamiriro edesktop, masystem anoshanda, maanoveling, chewing gum, keyboards, iPhones, maPC, nezvimwe.
Kwandiri yakakwana uye inokwezva ndeye KDE asi ini handishandise sezvo sarudzo dzakawanda dzinoita kuti ndive nedzungu.
Ini ndinoda tafura yechiedza uye izvo zvandinoda pedyo, izvo zvandinoshandisa Xfce iyo yandinoda.
Ini zvakare ndinoshandisa Gnome 2 kubva kuSolusOs uye ikozvino ndiri kuyedza xlde iyo isina kushata zvachose, uye inosanganawo nezvandinoda.
Kubatana, Cinnamon uye Gnome mumaonero angu hazvibatsiri uye zvinouya nekuona, ndisati ndashandisa KDE yemavara uye inoshanda, izvo zvisiri izvo.
Ini ndichave ndichipa KDE mumwe mukana, ndaverenga zvakawanda zvakanaka ongororo munguva pfupi yapfuura.
Kune ini chikamu changu, izvozvi ndine Mate uye Compiz uye ndinofara nehupenyu, sekunge ndichiri neGnome2 ...
Pindura kuna FerGE
Chinyorwa chikuru, chakanyatsoenzana, +1!
Ehezve, ipapo ndinofanira kunge ndiri pakati peasara 2% evashandisi nekuti kwandiri iko kunonyanya kukosha application nhasi uye pasina kupokana iyo yandinoshandisa zvakanyanya - iyo yandinoshandisa zvakanyanya, ndinofanira kuti- is browser: ndinogara vane rimwe kana mamwe mabhurawuza akavhurika, iwo ari nzvimbo yekushandisa kwangu muchina.
Ehe hongu, bhurawuza iyi ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mafomu, asi mukupedzisira kune zvese zvaunofanirwa kufa muFaira maneja
- KDE (mushandisi weupenyu hwese, uye musimudziri).
- Kubatana (ine pfungwa huru, asi kuita kunotyisa).
- XFCE kana LXDE (ivo vari padanho rakaenzana, vanochengetedzawo).
- Sinamoni (yakafanana yekare, hapana chitsva).
- Gnome (isingagoneki).
Pindura kune hipersayan_x
@hipersayan_x Unosimudzira pa KDE? Ungave uchifarira kubatana mukugovera here?
Uye iwe unofungei nezve MATE DESKTOP ??? Ndinozvida. Gnome 2 forogo ndinovimba hupenyu hwakareba. http://mate-desktop.org/
Parizvino, KDE ndiyo yakanakisa desktop kwandiri, kufambira mberi kwayo kwave kunoshamisa zvese mukugadzikana uye nekumhanyisa, uye izere kwazvo uye inogadziriswa. Ini ndaivewo mumwe weGnome inopukunyuka mune yayo yazvino vhezheni, kutanga nekuda kwayo kusingaite interface yeyakajairwa pc, ayo mashoma (angangoita nil) ekugadzirisa sarudzo, kuwedzera kune iwo mazhinji madingindira haafarire kwandiri, zvakare achiwedzera iyo dambudziko rekuwedzeredzwa izvo zvisingaenderane nekupfuura kweshanduro, kunze kwekudya zviwanikwa zvakawanda kupfuura KDE. Ini ndaishandisa XFCE neMATE, asi havana kundinyengerera zvakawanda. Uye hazvidikanwe kuramba kuti kune akanakisa ekushandisa maGnome, mune yangu kesi ini ndinofarira kushandisa iyo Gnome multimedia application kupfuura iyo KDE idzo. Zvakafanana munhu wese anoshandisa zvinoita sezvakanaka kwaari uye zvinoenderana nezvaanoda, uye yangu izere neKDE senzvimbo yedesktop.
Munguva pfupi yapfuura ndiri kushandisa dzimwe nzira mbiri dzisina kutaurwa pano, razor-qt uye yekutanga (pantheon shell). Reza (isiri nzvimbo yedesktop) ndinorishandisa senge rudzi rwe kde pasina kwin (ndinoshandisa openbox) uye ndisina plasma. Inoshanda chaizvo (inogadzikana kupfuura plasma sezvo iri nyore) uye inoshandisa zvishoma (inoshandisa isingasviki 250 MB ine akati wandei kde maitiro akatanga.
Pantheon ignome shell kana ndisingakanganise, inoshandisa gala semaneja wewindows, mafaera sefaira refaira, puranga sedoko uye zvimwe zvirongwa zvakati zvakagadzirwa nechikwata chekutanga. Kwandiri zvakangonaka, inonyatso gadzikana uye yakashongedzwa default nharaunda yandakawana kudhara kuwedzera mukugadzikana (kunyangwe iri mune alpha kana beta), kuti kana, haina zvakawanda zvingasarudzika.
Razor qt Ini ndakaiyedzawo uye ndinofanira kutaura kuti inogona kukwikwidza kukuru kuLXDE. Iyo haina mamwe maturusi (semuenzaniso, mu netbook hapana kana chinhu chekufungidzira iro bhatiri danho, kana zvirinani ini handisati ndariwana), asi mune zvese zvinoita senge kwandiri kuti rine ramangwana, kunyangwe nguva pfupi yadarika ndisina kuona Nhau dzeichi chirongwa.
Kana zviri zve pantheon, ini handiwanzo kushandisa Gnome Shells kushingairira nekuda kwechimwe chikonzero chisinga zivikanwe, zvisinei chirongwa chepuraimari chagara chine hanya nekupa imwe nhanho yemhando mukushandisa kwayo, saka ndinofungidzira kuti vhezheni yacho ichapa zvakawanda kuti vataure. nezve.
Nezvechinyorwa, ini ndakaedza ataura madhaputa uye zvinoda kuziva kwandiri kuti Gnome 3 yakatsamwisa maShells mazhinji uye mafilosofi ekushandisa neiyo imwechete base. Ndinoyeuka pavakazivisa kuti vhezheni 2.30 yaizove vhezheni 3 (kunyangwe yaive yekupedzisira 2.32), ivo vakataura kuti shanduko yaizove isinganetsi, pamwe zvichireva izvo zvakaitika neKDE panguva iyoyo.
Semaonero angu shanduko yanga isina kukurumidza, asi yaigumbura, kunyanya nekushaikwa kweanoshanda, kunyangwe sezvandino dzokorora, ini handina kuishandisa zvine mutsindo saka maonero angu anogona kupokana.
Chekupedzisira, kupindura iwo mubvunzo mune iyo posvo, KDE ndiyo desktop yangu yandaifarira, nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye kunyangwe paine zvinhu zvandisingafarire (semaitiro ezviyeuchidzo pasi pemamwe mamiriro), panogara paine dzimwe nzira kana musimudziri kutaurirana.
Ndine urombo Vicky, asi unogona here kutaura kuti ndeipi distro yaunoshandisa uye neimwe info maitiro ekuisa Pantheon Shell?
Izvo hazvisi pasina, ndanga ndichishandisa Enlightenment (kana E17) kwenguva yakareba uye zvinondishandira. Iyo inogadziriswa, INOSHANDA NZIRA YANDINODA. Ini ndinoremekedza zvikuru XFCE, asi E17 inokurumidza seizvozvo. KDE ine zvinoshamisa zvinoshandiswa, senge ine simba K3B, ini ndakangovaisa uye vanoshanda zvinoshamisa nesimba ravo guru asi vasingarasikirwe nespeed yandinoda. Pcmanfm inondipa izvo zvandinoda semaneja wefaira uye ini ndinotora kubva kuGnome kuenda kuGimp uye zvimwe zvirongwa zvakanyorwa muGTK2o3. Ichokwadi ndechekuti ini handina kana chinhu chekugodora ma greats, vanondipa iwo mapurogiramu andinoda, ndichigadzira, pamwe neE17, nharaunda yakanakisa yandakambove nayo, inokurumidza uye inogadziriswa zvakanyanya. Zvakaipa zvinoregeredzwa. Zvizame, ichokwadi kuti zvakasiyana zvakanyanya pakutanga, asi zvakakodzera kutora maminetsi mashoma kuimisa.
Ndatenda kana iwe waverenga ese makomendi. 🙂
Ini handikwanise kutaura zvakawanda nezve E17 nekuti ndakamboedza chaizvo, zvishoma .. Kutaura chokwadi handizive kana iri Desktop Nzvimbo kana Windows Manager ……
Ini ndashandisawo e17 uye inokurumidza kwazvo, kunyange tichifanira kutaura chokwadi ichiri kushaya basa, asi inogona kukwikwidza zvakakwana neLXDE neXFCE pasina matambudziko. Izvo zvakunditadza ndezvekugadzirisa menyu (ini ndaizoda kuti ibate odha yandinoda) uye resolution yegirazi uye pane dzimwe nguva haina kuichengeta uye inodzokera ku800 × 600 ...
Unogona here kutaura zvishoma nezve ruzivo rwako neE ??? Kungotanga neMageia, ini ndinotama kubva kunouya ndichishandisa Debian uye zvigadzirwa uye ndiri kuenda kuisa E17.
Chine chinangwa kwazvo chinyorwa .KDE chakanakisa, XFCE zvandinoremekedza.
Zvakanaka kutumira. Ndiri kufarira kwazvo KDE nekuda kwezvikonzero zvimwe chete zvaunotaura (kunyanya runako), asi nekuda kwenzira yainorwadzisa kuita ndakagara ndichiguma ndichisiya (kekupedzisira nguva yandaishandisa yaive nedebian, iyo yandinofunga ndiyo distro yakatsiga , asi kunyangwe debian KDE yakaguma ichiremerwa). Nguva pfupi yadarika ndakapa Linux Mint mukana zvakare, neCinnamon, asi zvakare, kunyange hachisi chinhu chikuru, kurasikirwa kwekuita nekuda kwekushandisa zviwanikwa kunoguma kuchindirwarisa. Asi ndisati ndarasa Mint, panguva ino ndakafunga kuyedza XFCE (makore akati wandei apfuura ndakaishandisa muXubuntu, pachiitiko ichocho ndakatambura nembugura muThunar yakaturika komputa yangu), uye chokwadi ndechekuti ndakafadzwa nekuita yekomputa yangu., yakareruka uye kuita kukuru. Netsika (uye nekuti pane zvirongwa zvisingandigutse muLinux kana nekuti hapana sarudzo dzakaenzana) ndinogara ndichishandisa Windows 7. Asi masvondo akati wandei apfuura ndinoshandisa Mint ndichienderera neXFCE, uye zvishoma nezvishoma ndinodzokera kuWindows (kune vamwe chaicho chinodiwa). PCManFM yakanaka, inova ndiyo yandinoshandisa. Zvichida kwauri izvi hazvina maturo: Ini zvakanyanya (zvakaipa) ndaigara ndichiteerera kumimhanzi ne plugin inonzi "Enhancer 0.17" iyo inovandudza ruzha nenzira yakanaka, kana muLinux paive nemutambi anoitsigira kana iyo yaive neyakaenzana. complement, kukwanisa ipapo kusvetuka kwangu ku linux kunenge kuri kwekupedzisira. Zvichakadaro, ini ndinoteerera kumimhanzi neAimp kuburikidza neWine ... Nguva pfupi yapfuura ini ndainzwa ndisina kugadzikana, kufara uye kugutsikana ndichishandisa linux. Ini ndaifara kwazvo kuziva kuti debian akasarudza paXFCE, mubatanidzwa uyu uchaita kuti makomputa ave nesimba kwazvo ... Ini zvechokwadi ndichadzokera kuna debian. Mufaro
Iwe haugone kutaura kuti Gnome neShell yayo yakaipa application kure nayo.
Hongu unogona kutaura kuti zvakashata, nekuti zvakashata, uye zvinobva zvanyanyisa kushata.
Pamwe zvinoita kunge zvakashata kwauri nekuti zvakasiya kumashure pfungwa yepaneru + desktop ine ma icon + yekutengesa runyorwa asi kwandiri yaive yekumberi, pandakangoedza kushanda nayo, unonzwisisa kuti sei zvinhu zviri.
Zvishoma uye zvishoma zvigadzirwa + zvishoma zvigadziriswe + zvinorema + kushomeka uye kugona = kushata
LOL !! Uye ini handidi kushoropodza Gnome zvakanyanya, asi ichokwadi here, ini handinzwisise kuti nei iri shoma uye shoma zvigadziriswe? uyezve isu tinofanirwa kushandisa zvisina kufanira kunyorera uye zvinowedzera, izvo zvinofanirwa kunge zvichitove zvichisanganisirwa nekutadza ...
Ndine urombo Gnome 3, kana iwe uri mumwe wevatatu vakaipisisa !! Uye izvo zvandisingazive nezve XFCE ...
Kwakanyanya kucherechedzwa ini ndinoshandisa GNOME-Shell muFedora 17 ini handina zviwanikwa zvakawanda 1 GB ye RAM uye Pentium 4 processor asi kunyangwe iyo inoshanda chaizvo. Kuchinja musoro wenyaya, waiziva here kuti kuchave neiyo EFL Yekuvandudza Zuva muBarcelona Spain? http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 NdiNovember 5, zvinoita sekunge enlightenemnt varikutoisa mabhatiri kutarisa mumugwagwa iwo anoratidza kuti ivo vari kutoshanda paChiedza 18 http://trac.enlightenment.org/e/roadmap Ndinovimba iwe unofunga nezvazvo kuiburitsa senhau.
XFCE RULLZZZ, zvandiri kutaura ndezvekuti ndakapfuura navo vese, chishamiso asi chinodya zviwanikwa uye kwandiri izvo ini handigare ndine kabhuku kakabatana nesimba, hupenyu hwebhatiri hwakakosha kwazvo, ikozvino ne xfce + debian inogara kwe5: 30, ine KDE + Arch yakagara 2:40, asi pasina kupokana KDE yakanaka uye inogadzirisika, ikozvino XFCE iri kuvaraidza sezvo uchifanira kuva nenguva yakanaka yemahara kuti uisiye sekuda kwako, elav senguva dzose chinyorwa chakanaka kwazvo uye blog raive rakanaka asi pane chimwe chinhu chandisingade ini ndinoona kuti iro rakakodzera pani rakakura kwazvo kana zvirinani pane zvidiki zvidiki rinotaridzika rakakura hehehe, kwaziso vakomana uye nekutenda kwako basa !!
Dai iwe waiziva kuti zvirinani kupfuura mu KDE neDebian, ini ndaona kuti bhatiri rinoshandiswa rakakwira kupfuura neXfce muDebian 😕 ini handizive, pamwe ndiwo mazano angu 😀
Ndiko kuti kunwa kunofanirwa kuve kwakakwirira kana uchidya zviwanikwa zvakawanda, zvirinani kwandiri mune arch kde ndakapfurwa pa400 mb yekushandisa base, ndiko kuti, pasina chinhu chiri kumhanya, uye neicho icho bhatiri rakagara nguva dzinenge 2:40 hrs, ikozvino ini usati waedza KDE pane debian, ndichaona kana ndichizosvika kubasa kupera kwevhiki uye ndozokuudza gare gare mafambiro andinoita nechikwata changu, kwaziso Ariki
Zvakanaka, ndinodawo KDE haishande chaizvo naDebian, asi izvozvi ndinoshandisa KDE neMageia uye ndiri kuita zvakanaka !!
Mhoro, chinyorwa chakanaka. KDE idhizaina rakazara uye rakabatana, kunyangwe ini ndisingazvione zvachose uye zvinononoka kuvhura mashandiro pane dzimwe nharaunda uye nekuti nesarudzo zhinji uye kwese kwese vanondiita dzungu. XFCE idesktop yakanaka asi haina chikonzero chekuti ive isina kukwana kubvira kare kare payakamira kuve yakajeka desktop, inokundikana neThunar, iine keyboard mapfupi uye makiyi ekushanda uye zvimwe zvingasarudzika sarudzo, gnome haina kuremerwa, kwandiri Iyo inonditangisa kumusoro ine isingasviki 300 MB uye kunyangwe yanga yave shanduko yakazara mune pfungwa yedesktop nharaunda (ini ndingati ndiyo chete yepakutanga desktop desktop) yanga iine zvibereko zvikuru uchishandisa keyboard. LXDE ndiyo isina huremu desktop iyo inofanirwa kunge iri, ini ndinoiregerera nekuda kwekukanganisa kwayo musimba maneja uye zvichingodaro nekuti inofanirwa kunge iri yeakare maPC.
mr linux akadaro
Izvo zvazviri kuve nekombuta yakanaka, kwete yechokwadi @Elav, ikozvino urikuisa yega desktop desktop munzvimbo yayo yakakodzera, zvakaratidzika kuva zvisinganzwisisike kwandiri kuti iwe wakangotaura zvishamiso zveXFCE (iye anokodzera ivo, kana zvimwe kushayikwa), vashoma "kutuka" kweGnome 3 (inobvumawo) uye KDE inenge yakanganikwa.
uye zvese nekuve neakanaka mana gigabytes egondohwe, urikushandisa KDE zvakare, ndinokugamuchira zviri pamutemo kune iyo KDE kirabhu !!!!
Hahahaha, muchokwadi, ini ndine KDE paNetbook futi, pamwe neXfce hongu ...
Rondedzero yeElav yakanaka kwazvo, munguva yangu pfupi mu linux ndakaedza nharaunda ina, uye iyo yandinonyanya kufarira ndeye xfce, ndinoifarira nekuti ndinogona kuigadzirisa sezvandinoda uye haina kudya zvakanyanya se kde , iyo chete yandisingafarire ese mana inyongori.
KDE iyo semantic desktop.
XFCE kusvika kurufu, ndizvo zvese zvandinoda, kwete zvekare, kana zvishoma.
Ini handishandisi dolphin, nautilus, kana thunar. terminal yakanaka uye voila. Ini handidi kate kana gedit, vim uye voila. pane zvese zvimwe zvese zvandinoda kuita saizi, kufambisa windows, kufamba pakati windows uye kukwanisa kuzviita uchishandisa chete keyboard (google chrome + vimium kufamba) unonyatsoda kuve unogadzira? kune nharaunda dzakawanda, zvirinani pane izvo zvataurwa kuti zviite izvozvo. Kuwedzera kugadzirwa kuri kutaura zvakanaka kune mbeva uye kugona kuita zvese, kana chinenge zvese nekhibhodi, chinhu chakakosha ndechekuti inogadziriswa zvakakwana uye unogona kusarudza makiyi ekushanda nawo
Ehe, ini ndinofunga kuti kutaura kuti desktop yakadaro inobudirira haina musoro sezvo kugadzirwa kunoenderana nemushandisi, asi Elav inobudirira neKDE, desktop yako, ini neGnome Shell, imwe ine lxde zvichingodaro.
Iyo yakanakisa distro neLXDE ndeye KNOPPIX .. nekuda kwekuti iwe unogona kubata ese maKDE uye eGnome kunyorera kuchimhanya zvakakwana. Ndine izvi zvakaiswa mune ine mwero p4 2.26 uye 700mb yegondohwe
Nhasi ndinongoshandisa windows, asi ndinotarisira Mageia 3 ne KDE 4.9 uye kudzokera ku linux semazuva angu ekare.
Pindura kuna ULVER
Ari kuzomirira kwenguva yakareba 😉
Roberto Gea akadaro
Uye vaivepi mamaneja ewindo, openbox, fluxbox, kana mataira mamaneja senge dwm.
Kwete nekuti vane sarudzo shoma nekukasira (kazhinji ivo vanogadzirisika kupfuura iyo huru DE), zvinoreva kuti havana simba shoma, kana kubereka sekudaidzira kwaunoita elav, uye izvi hazvishandiswe chete mumaPC ane zviwanikwa zvishoma.
Pindura kuna Roberto Gea
Chinyorwa ichi chiri pamusoro peDesktop Environments, kwete Windows Manager. Ichokwadi kuti neOpenBox, Fluxbox ... nezvimwe unogona kuva nematafura akanaka, asi haasi iwo maDesktop Enzvimbo akadaro ..
Kuvhenekerwa kunopinda mumatafura ??? Uye mumwezve mubvunzo, ndeapi mamwe madhesiki aripo anogona kuyedzwa? Zvingave zvinonakidza kuziva zvishoma pamusoro penyaya iyi, kupa mukana kune avo vasina kutaurwa zvakanyanya, handiti?
Ndine kusahadzika kwakafanana newe. Saka nekudaro izvo zvinonzi zvinonzi Desktop Nzvimbo, ini ndinongoziva idzi 4 uye RazorQT, handizive kana paine chero kunze uko.
Zvino, ndinofunga KDE yakafanana kana kureruka kupfuura Gnome.
Kunze kwekuve wakasarudzika uye kuwedzera kunaka 😀 hahahaha.
Chinyorwa chakanaka elav, asi ini handisi kuzobvumirana zvishoma nezve LXDE.
Kwandiri, LXDE iri nyore kwazvo kugadzirisa zvisina kufanana nedzimwe nharaunda. Sezvo nezvose zviri nyore sekuverenga zvinyorwa kana kutsvaga paInternet.
Avo vanondiziva vanoziva kuti ini ndinoshandisa LXDE, kunze kwekuti ini ndinoshandisa Fluxbox (iyo yandave ndinayo kwemakore mana) pachinzvimbo cheOpenbox neThunar pachinzvimbo cheOpenBox neCompton kuwedzera zvimwe zvinyorwa.
Nei ndichiishandisa? Izvo zvinongoita zvandinoda kuti zviite, pasina kushandisa yakawanda RAM uye CPU (Compton inongodya chete 2Mb ye RAM).
Uye kune vamwe kuti vaone kuti kana LXDE kana Fluxbox zvisina kunaka, ndinokusiya uine 2 screenshots ematafura angu:
Flux bhokisi: http://fav.me/d3iilrh
Zvakanaka, kwemakore mashoma ndanga ndiri mushandisi weLinux zana. Kutanga nekuda kwezvikonzero zvedzidzo, Computer Injiniya uye nekuti ini ndinoifarira zvakanyanya. Zvino, ndinoda zvinhu zvakapusa uye ini handina dambudziko kuyedza kudzamara ndawana chimwe chinhu chandinofarira.
Ndakatanga neUbuntu + Gnome kudzamara vaenda kuUnited. Gare gare ndakajaira iyi nharaunda. Ndakaedzawo Cinnamon naMATE. Pakazara, mushure mekuyedzwa kwakawanda ini ndinobvuma kuti ini ndinosarudza MATE kana Cinnamon, zvinoenderana nekuti ndinoda chinhu chakapusa kana chimwe chinhu chine ruvara.
Kubatana kwakanaka futi, asi sezvo ndaneta nekuisazve mwedzi yese mitanhatu, ndine LMDE + MATE.
Iwe unofungei nezve idzi nharaunda nhatu? Kunyanya MATE inova forogo yeGnome3 uye Cinnamon inova iyo Gnome2 forogo. Iyi ndiyo nzira iyo Gnome yaifanira kunge yakatevera here? Kana kuti zvakadaro wakasiya musuwo wakazarukira iwo?
Kana iwe ukandibvunza, ini ndinofunga kuti MATE chirongwa chekuti kunyangwe chiri chakanakira vashandisi vazhinji, zvishoma nezvishoma zvichakanganikwa, nekuti kushaya nguva kuchachidya. Sezvineiwo, Gnome 3 inofanirwa kuve yakakwenenzverwa neClassic kana FallBack modhi.
Kune mamwe (ma) andinofunga achavawo nerombo rakanaka.
Dhesiki rakanakisa, pasina mubvunzo iro randinoshandisa. Icho chakareruka, chakasununguka uye chinoshanduka zvakanyanya 😉 http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
Hahaha, iyo inogadziriswa zvikuru ini ndinokahadzika ..
LOL !! Zvakajeka !! Asi ini zvakare ndinofunga kuti iwe unogona chete kuwedzera zvigadzirwa uye dambudziko richava apo mumwe munhu anopinda "desktop yako" uye anofambisa marongero ayo!
Gnome Shell, sezvo iri yega desktop desktop (kusasanganisa Unity) yandakashandisa.
* Nokusingaperi Gnome Shell *
Pindura kuna Louis-san
Ini ndinotarisa yakawanda yeKDEro nguva pfupi yadarika, hehehe.
Kwandiri iyo inonyanya kuchinjika ndeye XFCE kunyangwe zuva rega rega ini ndichifarira openBox zvakanyanya
Ini ndinofunga zviripo nekuti iyo Gnome chirongwa hachina kufarira (kusiya parutivi kuti chakanaka here kana kuti kwete), uye zvizhinji zvezvatinoda pakombuta yedu kuzivikanwa, kugadzirisa uye kutaura ... chimwe chinhu icho KDE inopa chaizvo chaizvo .. Uye mukati nyaya yedzimwe nharaunda dzandinoona isina kusimba poindi, kana iwe uchifanira kugadzirisa faira yekumisidzana uye nekushandisa mamwe maapplication uye / kana kuwedzeredza, vashandisi vasingade ku "tinker", vazhinji vashandisi vekupedzisira iyo PC yavo ndeyemabasa chete. , basa, uye varaidzo zvinotya uye dzokera kuWindows kana kutsvaga imwe nzira. Rega ndijekese, ndinonakidzwa neiyi "tinkering" nekombuta yangu, asi vanhu vazhinji vanoona basa nezvose zvandinoita uye vanozvitya. Yangu kuravira, yakanakisa desktop ichave iyo inobvumidza vashandisi vekupedzisira kugadzirisa nharaunda nenzira yakapusa uye yakanakisa, mukuwedzera pakuita kuti basa ravo rive nyore (uye kwete kuvhiringidzwa nesarudzo zhinji kudaro, KDE ziso)
Mhoroi munhu wese, ndanga ndichishandisa akagoverwa akati wandei paPC yangu kwechinguva uye ndinogovana zvinotaurwa nevamwe, kamwe kamwe iyo MATE nharaunda, vamwe vanofunga kuti inogona kushaya basa asi kana iwe ukatarisa kushandiswa mune semi rolling kuburitsa distro senge LMDE Zvinogona kunge iri iyo Push iyo inoda basa, uye zvinogona kutaurwa kuti iyi ndeimwe yematafura akanakisa kune vanhu vanoshandisa Gnu / Linux kekutanga, kunyangwe ini ndichinyatsoda sinamoni ine zvimwe zvinowedzera iwe unogona kuitarisa zvishoma kune iyo mintmenu inoshandiswa muMATE, Gnome shell yakave neshanduko zhinji dzandinotarisira kuti mukufamba kwenguva dzinogona kuve dzakanaka kunyangwe ichiri chimwe chezvandinoda zvakare, asi sekutaura kwaElav inyaya yekuravira uye zvido
Kde ichiri yakanakisa desktop maererano nehunhu hwekuita, asi zvirokwazvo kana tikaramba takagara nePentium IV zvachose zvakajairika kuti tinononoka ...
Inti Alonso akadaro
Kutaura nezve KDE, (iyo yandinofunga kuti nharaunda yeLinux kazhinji inotarisa pasi zvakanyanya) Ini ndinogovana maitiro aMalcer mune mifananidzo yeiyo inotevera CHakara (ichibuda ino kana svondo rinouya):
Pindura Inti Alonso
Ndofunga kudaro !! KDM neKSplash ndizvo zvandaida zvakanyanya kutaridzika, ini ndinomirira vhezheni yeMegeya !!
Ini ndinoshandisa LXDE uye ini handichinje iyo chero chinhu, inogadzirisika, pamwe yeiyo newbie yakaoma pakutanga asi mushure mekuzviita kekutanga ichave chimedu chekeke uye chandinofarira zvakanyanya pamusoro pemwenje tafura ndeyekuti inobvumira zvirongwa zvedu kuti zvishande mune yakanyanya kuyerera zvisinei nekuti une muchina wakanaka. XFCE inoita kwandiri kunge yakanaka kwazvo desktop asi chenjera, haina kujeka kana iwe uine muchina une mashoma zviwanikwa handifunge kuti ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Ini ndashandisawo ICEWM uye zvinoita kwandiri kunge rakanakisa risingaremi desktop, inogadziriswa uye yakanaka kwazvo, kunyangwe ndichifanira kushandisa nguva yakawanda pazviri.
Pindura kune cogan
Ini ndinobvuma kuti LXDE inozadzikiswa nezvinhu zveGnome, uye kunze kweizvozvo kuti uigadzirire iwe unoda ruzivo rwekare kuti uchinje.
kwandiri yakanaka KDE iri vhezheni 3.5 ..
Ini handidi shanduro dzanhasi .. pachokwadi ini ndatoisa 4.5 ini ndinofunga asi handizvifarire. inononoka ...
Iyo vhezheni 4.5 yanga isina kunyatsonaka kutaura, ndiko kuti, haina kubwinyiswa zvachose ... 4.8 kana 4.9 ndechimwewo chinhu.
Zvakanaka, ini ndinopfuurira ne4.3 !!! uye ini ndinoshanda pasina matambudziko kana kushamisika, zvese zvinoshanda uye zvinondipedza zvishoma, seGnome 2.8
Ndiri mushandisi: slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. ZVINOKOSHA UYE ZVINOGADZIRA ...
ASI TODAY INSTALL MUBUNTU YANGU NDAKANGA NDISINA KUFANIRA ...
Ini ndaishandisa Gnome kwenguva yakareba ... kunyangwe Gnome3 asi iyo vhezheni nyowani haina kumbobvumikisa ...
Ndakaedza KDE uye zvese zvakachinja! Iyo ndiyo chaiyo yakanakisa nharaunda nharaunda ... inonzwa ichibereka uye yakakwana… haumbofi wakasara neiyo "yekushayikwa chimwe chinhu" kunzwa.
Ndakazviedza paChakra, Sabayon, OpenSuse uye ikozvino paKubuntu. Ese ma distros anga akave akavakwa neKDE.
KDE ndiyo yakanakisa, ini handinzwisise kuti nei vasina icho sedesktop yedhisheni munzvimbo zhinji dzinogoverwa, kana dzichishanda uye zvichiumbika.
Zvinoita sekunge kwandiri kuti iri ndiro dambudziko chairo: iyo nzira zhinji dzaunopa vanhu, ndipo paunonyanya kuvashungurudza (zvakanyanyisa!) Ndosaka vazhinji vema distros vachisarudza nzvimbo yakapfava uye isina kukwana izvo zviri nyore kwavari kudzidza nekushandisa .
Iko kune zvakare chokwadi: nhasi vazhinji vevashandisi ve desktop havachere muhurongwa hwavo, vanoshandisa izvo zvavanopihwa uye nenzira yavanopihwa - ichi chichava chimwe chezviitiko zvinobudirira zve zano raApple kune zvigadzirwa zvavo?
KDE SC icharamba iri nharaunda yesarudzo kune vashandisi vemberi ...
Izvo zvinoitika kuti havazi isu tese tinofarira kugadzirisa, KDE ine nzira dzakawanda dzekuita kuti iwe ufarire. Kunze kweizvozvo inoda zvishoma zviwanikwa.
Zvirinani ndinogutsikana neLXDE kana kunyangwe OpenBox, ini ndagara ndichifarira kumhanya uye kwete dhizaini.
KDE Mitemo !!
Sezvo Gnome 2 yainge yaenda, ndiri kunamatira naUbuntu 11.04 ... Uye ndichitsvaga "chimwe chinhu" chinokodzera ini nevamwe vese vemhuri ... Uye ini ndinofunga ndinonamira neXfce. Thunar? Zvakanaka, ini ndinoshandisa Midnight Commander kana TotalCommander pasi pewaini (ndine urombo, HAPANA mamaneja emafaira andayedza pa linux huya padyo, ndoda kuirova). Vhidhiyo? VLC, hongu. Audio? Nhasi ndawana Qmmp, icho chisiri chinhu kunze kweinux winAMP, inogona kushandisa kunyange 2.x makanda. Xfce mu linux Mint yakanaka kwazvo, nekuti inoshandura iyo "zvakajairika" menyu yekushandisa yeiyo yakawanda zvakakwana mintMenu.
Nezvo ini ndine system inobata zvishoma zvishoma (PC ine mashoma makore, yatove, ine 120Gb yeHD), inoshandisa zvakati wandei, uye isinganyanyo kanganisa. Dambudziko rangu ne KDE 4 kana Gnome3 ndeyekuti ini handichina nguva yeku "dzidza" pane zvinhu zviripo: kungave nharaunda inonzwisisika, kana kuti haishande kwandiri. Ok, pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa kuburikidza netemu (ini handisi kunyunyuta, ndiri imbwa yekare uye ndakatanga nemakomputa IBM isati yatengesa iyo PC yekutanga ...), asi kana ndichifanira kutambisa maminetsi mana ku rangarira kwandinofanira kushandura kumashure kwedesktop, ini handione pane kugadzirwa (muenzaniso….)
Zvisinei, mushure memwedzi mishoma, ndakaedza (ndikarasa) LXDE (vamwe vese vemhuri havazvifarire), Gnome3 / Unity / Shell (kana iyo yakasimba linux ndeyekuti iwe unogona kushanda sezvaunoda, nei Gnome ini handikwanise? Kunze ...), KDe (inorema, uye inovhiringidza, zvakanditorera inopfuura hafu yeawa kuti ndibvise chinhu icho kubva kuPlasma kana chero chinonzi, uye pa netBook ndaifanira kuenda kune internet. kuziva kuti zvachinja sei kuva «zvakajairika Uye izvo zvekushandisa ... zvakanaka, kunze)
Muchidimbu: Ndine Xfce uye mint nesinamoni (linuxMint + Cinnamon). Ndiri pairi. Muchokwadi, ini ndine liveUSB delinuxMint Xfce. 🙂
TotalCommander pasi pewaini? Hahaha, zvinotyisa sei. Iwe hauna kunzwa nezveDolphin, handiti? uye Krusader?
lxde harisi rakaipa desktop, ndiyo inokurumidza kupfuura yandinoziva uye nenguva diki iwe unogona kuiita yakanaka ... vhoti inofarira iyo yega nharaunda inoshanda zvakanaka kwandiri pane yangu yekare pc !!! haha
Wakaedza AwesomeWM kana dwm?
Ndatenda nekunyora ichi chinyorwa uye kune vese avo vane pfungwa. Unonyatsodzidza.
Ndave neLinux kwemakore maviri uye ndashandisa zvakati wandei nemhando dzakasiyana uye nharaunda.
Ndakasangana nemunhu Jaunty Jackalope gnome, ndakamuda chaizvo uye ndakaroora ubuntu. asi paakabuda aine kubatana nharaunda ndakatiza sekunge vaindidzinganisa nemabara. Ndakafamba-famba kuburikidza akasiyana madross ndisina kuwana hukama hwakakomba, asi rudo runodzokera kubhuku rangu rekunyora.
Linux Mint Maya Xfce 32 zvishoma
Zvimwe zvese zvakanaka asi ndinonamira neiyi nekuti inoshanda nenzira yandinoda nayo.
Pindura kune afix
Ndatenda neruzivo kubvira pese pandaida kurodha pasi kurudyi xfse.gnome dhesiki .. ..blablabla, uye ini handina kunzwisisa knob, chokwadi chinodzidzisa zvikuru.Nyika ye software inoshamisa
Gustavo Martinez akadaro
Ini ndinoda LXDE, yakareruka, inomhanya kwazvo, inoratidza zvese zvinodiwa uye inogona kugadziridzwa zvakanakisa nekutamba padyo nebhokisi rakavhurika, rakanakisa pasina kupokana.
Pindura kuna gustavo martínez
Zvakanaka, kusvika pandinofunga, ndakashanda kubvira 2000 neLinux, ini ndangove mushandisi wekupedzisira uye handiwane zvakawanda nezve izvo zvekugadzirisa, iyo nyaya iri kubvunzwa maererano nezvinodiwa uye zvandinofarira ndinogara neKDE, Ndine netbook ine kde nenhunzi, ndaedza gnome classic, 3, kubatana, xfce uye chaizvo asi hazvifadzi kushanda pa netbook nenzvimbo idzodzo, pamwe gnome 2 yakatariswa zvishoma asi uchifunga zvavakataura pamusoro ichokwadi kwazvo dzimwe nguva zvinotora imwezve mukugadzirisa kupfuura mukushanda saka ndinogara ne kde, pane desktop yangu ndine linux mint 14 nesinamoni uye inoenda ku100 ndinoifarira zvakanyanya, kutendeseka kana ukajaira kune imwe nharaunda zvinodhura zvishoma kuchinjira kune imwe, apo ini ndaishandisa gnome2 Zvakandibhadharira kde, ndinofunga kuti iyo mvura inogona kuve kuunzwa kwehumwe muubuntu nekuti kubva ipapo vashandisi vakatamira kune imwe nharaunda, iniwo ndinofunga kuti akawanda ari mashoma vanotya kde, vanoti zvakanaka asi zvakati siyanei, asi zvisinei pavanopinda vanosiiwa nezvakanaka mukuravira ... Sarudzo yangu ndeye KDE: D ...
Ini ndinoshandisa LXDE, ini ndakaedza ese uye sezvo ini ndiri kutsvaga kumhanya zviri pachena kuti ndinosarudza iyo, kana ini zviri pachena kutanga nekutarisa pamatafura akanaka uye nekufadza maziso angu ini ndinosarudza KDE, asi kumhanya mune zvese hakuna kuenzaniswa.
KDE isina mhedzisiro yakamisikidzwa uye pane yakanaka HW iri _practically_ nekukurumidza seLXDE - mamirioni emakesi emusiyano anogona kuvapo pakati peimwe desktop uye imwe inopihwa pamusoro pezvose mumaapplication anowanikwa pane desktop yega yega uko zviri pachena kuti haugone kana kuenzanisa mashandiro emaapplication yakagadzirirwa KDE neaya akagadzirirwa LXDE.
Ini ndakachinjira ku KDE nekuti gnome3 yanga isinganzwisisike, ini ndinowanzo vhura akasiyana mameseji mafaera (doc, txt) uye maspredishiti. Asi iyo nharaunda yakavasanganisa uye ini ndakavaisa kwandaida. Uye neDolphin ini ndinotowana mafaira eFTP, handichadi iyo filezilla uye naKate ini ndinovhura uye ndochengetedza shanduko kumawebhu pasina kushandisa vatengi veFTP (kunze kweDolphin)
Pindura kuna Alan
Kwandiri akanakisa MATE, neLinux Mint, imwe kupfuura.
Leonardo Daniel Velazquez Fuentes akadaro
Mhoroi, ndanga ndiri paLinux kwemwedzi mitatu uye ndanga ndichitsvaga akasiyana mavhezheni nekuparadzirwa kuenda kuburikidza Ubuntu 3, 13.04, xubuntu, linux mint, sinamoni uye xfce, crunshbag, fedora gnome uye xfce, bodhi linux, manjaro xfce, sinamoni uye openbox, yekutanga OS yakanaka
uye ini ndinogona kutaura nekuremekedza xfce kuti yakanakisa kupfuura dzose ndeya kubva kuManjaro uye handina kugara nayo, nekuti ini ndakaroora zvakazara ne sudo apt-tora kuisa, hahaha
mint xfce haina kushata kana, haina kuomesesa kugadzirisa
Pindura kuna Leonardo Daniel Velazquez Fuentes
Ini ndinoda LXDE, nekuti iwe unogona kuita zviitwa iwe zvaungaite nechero ipi yemamwe matafura asi uine isingaenzaniswi kumhanya! Iyo iri chaizvo, inomhanya kwazvo kunyange ichimhanyisa kunyorera senge Eclipse, gimp kana mabhurawuza azvino ane akawanda akavhurika tabo.
Kunyange chiri chokwadi kuti KDE ine zvese zviripo uye ichirerutsa basa, iro rakanyanya kushandiswa kwezviwanikwa rinoita rinorema uye kunonoka zvakakwana kune akati wandei mashandiro, kunyangwe zvakanyanya kana iro rakaomarara dhisiki rine makore aro uye rakarasikirwa neyakaitika. Kunyangwe chiri chokwadi kuti LXDE inokurudzirwa kune vashandisi vane ruzivo rwakati wandei nekuti dzimwe nguva pane mashandiro asina graphical interface nekukasira uye iwe unofanirwa kutendeukira kune inotyisa terminal, yakadaro kesi yekhibhodi mapfupi (pane Obkey asi haina kusanganiswa nekutadza).
Ini ndinofunga kuti kumhanya kukuru kweLXDE (kwakanyanya kukurumidza kupfuura Windows XP) kunogadzira zvikanganiso zvishoma mukushanda kwazvinazvo uye senzvimbo yakasimba, inotanga nekukurumidza zvakanyanya kupfuura chero imwe desktop uye zvese gnome application zvinoshanda zvakakwana. Huya, ingori nyaya yekuchinjira pairi uine zvishoma maitiro uye kushandiswa kwayo kwemazuva ese chidimbu chekeke; kukanganwa nezve kudzikira kana uchivhura windows, tsaona nekuda kwekushomeka kwendangariro, kunyanyisa indexing kugadzirisa, pakati pevamwe. Chero hari inokwana 🙂
kde inogona kuverengerwa kuiisa yakafanana nemamwe madhesiki
Gnome2 yaive (kwandiri) yakanakisa desktop desktop yandati ndamboedza. Mazhinji akareruka uye akasarudzika maficha akaita maneja weMexico chinhu chimwezve pane yangu runyorwa rweFavorite Environments. Ndosaka ndichiti, ERA.
Pakabuda Gnome3, chiratidzo changu chakandivhundutsa; Zvingaitwe sei kuti kwemakore akawanda kudaro ndichishandisa mabhawa maviri, iyo yekushandisa mashandiro inonyangarika uye ini ndinofanira kufamba kubva pahwindo kuenda kune imwe nenzira isina musoro yakadaro, ndiko kudzvanya kiyi yekubatanidza kana kuvhura yakaropafadzwa mamenyu ekushandisa ? Uye izvo zvemifananidzo, zvinopedza mamiriro acho.
Zvisinei, ini ndinofunga kuti Gnome3 yaive yakazara fiasco uye iine chinangwa chakajeka chekufananidza Kubatana. I think nyangwe wekupedzisira akamurova. Ini handizive.
Ini ndakakweverwa kuLXDE kwenguva yakareba. KDE ndeyeavo vanofarira kugadzirisa. Kwete ini, nenzira. Zvinonaka zvinonaka.
Carlos Bolanos akadaro
Pane ese linux ndinosarudza Linuxmint KDE neaya andakashandisa ese fedora, suse, ubuntu, mandriva cinemon nezvimwe uye ini ndinogara ndichifanira voldver ne linuxmint17 yakapusa kuisa mashandiro ese multimedia zvirongwa, internet, hofisi mifananidzo iyo screensaver, iyo Wallpaper etc.
Pindura kuna Carlos Bolaños
Román Alejandro Dailymot Hdez. akadaro
ndinotarisira kuti wagwinya paunoverenga izvi, ndinokuudza, ndakatenga nhumbi yekushandisa yakapihwa kwandiri ine windows 7, -amd athlon IIx2250 processor (64 bit) pa3000 mhz, amai targ asrok n68-vs3, ddr3-a1 2048mb / 400mhz, - yaive pirate, nekuda kwematambudziko ehupfumi uye yakatsvaga dzimwe nzira dzekuedza ubuntu, linuxmint, uye panguva ino fedora -kurarama, desktop-86-64-20-1. iso- izvo zvakandipawo matambudziko sekugumburwa. MuUbuntu ini handimbogona kuita odhiyo, maFedora maviri akagadziridzwa akatorwa pasi asi haana kushanda, nekuti hazvindibvumidze kuti ndiite chero chinhu mushure mekupinda mudesktop nekuti iyo inotora haifambe zvachose, kupedzisira kugadzira iyo skrini kana iyo mufananidzo iri akaremara uye akashamiswa. Nhasi ndanga ndichida kumisikidza windows zvekare uye zvaisagona, ini ndaedza kuisazve ubuntu asi kana, haina kuverenga diski yekumisikidza, mune imwe tsamba yandakaverenga inoti iyi vhezheni ye fedora inoita zvinoita Windows 8, iyo kuvhara nzira yekusakwanisa kuisa imwe sisitimu yekushandisa .———-- ndingaite sei kusimudzira art fedora kana kukwanisa kuisa imwe distro. ndokumbirawo ubatsire.
Pindura kuna Román Alejandro Lazcano Hdez.
Iri blog rakandibatsira zvakanyanya kusarudza chinongedzo ... zvinoratidza kuti chero munhu akazvinyora ane pfungwa yakakwana yezvaanotaura uye nezvaasingafanire kutaura nezvangu kuremekedza \_ -_- /
Muzvinafundo Yeow akadaro
Pasina mubvunzo XFCE 4 inobhururuka kwese kwese, uye kugona kwechitarisiko icho chainacho kuri kwakanyanya kwazvo kunyangwe kuchipesana neGnome. Asi KDE4 runako, inopesana nekuti yakura zvakadii kushomeka mune zvishandiso zvekare asi kana paine muchina wakawanda, yatove iyo KDE5 (iri kutendeuka vhezheni dzekutanga kutenderera) inonakidza. Pasina kupokana, kana uine zvinopfuura 2Gb zveKDE4 gondohwe (uyezve kana rechishanu rasvika) chichava chakanakisa chaunogona kusarudza. Zvichakadaro, XFCE ichiri sarudzo hombe.
Pindura kuna Professor Yeow
Demian Kaos akadaro
Kusvikira MATE atanga kuvabvisa: XFCE LXDE
Pindura Demian Kaos
Alexander Tor Mar akadaro
Ndiri fan we KDE, ndakashandisa gnome kakati wandei - ini handina kuifarira - zvinondinetsa, ndakabudirira kuisa LXDE pamushini usinganzwisisike, ndiri kuyedza XFCE uye ndakaifarira kupfuura LXDE ...
Pindura kuna Alejandro Tor Mar
Antonio Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Ini ndiri musayendisiti wemakomputa, technician uye programmer, ndinoshandisa windows muhofisi yezvirongwa zve accounting uye kumba ndine Windows neLinux laptop, piritsi uye nhare mbozha ye android.
Ini ndashandisa akati wandei distros uye ndakagara naDebian, nekuda kwayo kuomarara, huwandu hwemafaira uye uzivi.
Ini ndaishandisa gnome 2 nekureruka kwayo uye nyore, asi sezvo ini ndichishanda nemafaira zvakanyanya ndakanetswa nenyaya yekuti nautilus (senge thunar) inodzima (trashes) mafaera / maforodha pasina kukumbira kuvimbiswa, iyo inogona kuremara / kugoneswa muWindows. Ongororo, Dolphin uye PCManFM
Ndakabvunza iro gnome boka rechinhu icho uye vakati ndicho chigadzirwa uye havasi kuzochichinja.
Mune gnome ini ndaigona kuvhura mafaera kubva kune mamwe maPC pane network yemuno, iyo isingashande mu KDE / LXDE neDolphin / PCManFM zvakateerana, ini ndaifanirwa kuteedzera iyo faira kudisk yemuno kuti ndikwanise kuishandisa.
Nekudaro, mune distros senge knoppix, PCLinuxOS (PCLOS) uye kunyangwe mu-live-cd ye debian kana zvichibvira, asi kana uchivaisa pane yangu pc, ese ari maviri akazara (meta package) uye rimwe nerimwe (neakakodzera kana synaptic) zvisina kubudirira . Ini ndakatoisa nekugadzirisa huwandu hwenetiweki masevhisi (KIO, SMB, nezvimwewo).
Ndakaedza kushandisa Dolphin uye PCManFam mune gnome uye paive nezvinhu zvakawanda zvasara pasina kukwanisa kubatanidza.
Kubva gnome3 Ini handikurudzirwe neiyo interface kana kudiwa kwevhidhiyo yekumhanyisa zviwanikwa, asi zvinoshandisika, zvinogona kuvhura mafaera pane yemuno network asi zvakadaro haibvunze kusimbiswa painobvisa / kutumira kumarara.
Mu KDE kana ikabvunza yekusimbiswa asi ini handikwanise kuvhura mafaera pane yemuno network
xFce ingori gnome yakapusa, ndakaidzidza zvishoma uye handina kuifarira, uye inondisiya nezvose zvinodiwa
Ini ndinoda LXDE, asi ini handikwanise kuvhura mafaera pane yemuno network kana.
Maitiro ekugadzirisa PCManFM kana Dolphin kuti ukwanise kuvhura / kushandisa kubva kumafaira kubva kune akagovaniswa maforodha munharaunda yemukati?
Nzira yekugadzira Nautilus kukumbira yekusimbiswa paunenge uchibvisa mafaera kana maforodha?
Ini ndinogara nenzvimbo inosangana nezvinodiwa zviviri izvi
Ini ndinotobhadhara mhinduro yechero chimwe chezvandinoda
Pindura kuna Antonio Gonzalez
Roberto Perez akadaro
Mushure mekushanda pa gnome 2 yakapfuura kde 4, iyo gnome 3 sarudzo haina kundifadza zvachose, pane zvinopesana yakandityisa saka ndakatora mukana wekusvetuka kubva kde kuenda ku5 uye kubva panguva iyoyo yakandibata, ndinofunga ndiyo desktop yakakwana Kana iri Deepin ini handina kukwanisa kuigaya, yakanaka uye inogadziriswa asi haina chimwe chinhu chandisingazive uye neLxde neXfce ivo vachiri kuita kunge akakosha uye asina kuchena.
KDE 5 zvirokwazvo ndiyo inokunda.
Pindura kuna Roberto Pérez
UYE MATE !!?
Pindura kuna Dinimixis
Linaro inovandudza mashandiro e Android 4.0.4 kusvika 100%
Vhura Tsamba kubva kuDigia kuenda kuKDE Nharaunda